कसले जित्छ कमेडी च्याम्पियन ? यस्तो छ गजुरेलको स्टाटस - Nice Samachar
कसले जित्छ कमेडी च्याम्पियन ? यस्तो छ गजुरेलको स्टाटस
२८ भाद्र २०७८, सोमबार १८:०० 54 पटक हेरिएको
काठमाडौँ, २८ भदौ । रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन २’ अहिले चर्चित कार्यक्रम बनेको छ । पहिलो पटक नेपालमा सुरु गरिएको यस्तो प्रयोगले दर्शकलाई भरपुर मनोरञ्जन दिएको छ । हाँस्य विधा मार्फत भविष्य खोज्नेहरुका लागि पनि निकै राम्रो प्लेटफर्म बनेको छ । अहिले यो शो मा विजेता घोषणाको चरणमा पुगेको छ । अहिले प्रस्तुतीहरु सकिएका छन् । आगामी २ असोजमा विजेता घोषणा हुने प्रतियोगिताको फाइनल मात्र हुनेछ ।
त्यतिञ्जेल भोट खुला गरिएको छ । आफुलाई मनपरेको कमेडियनलाई भोट दिन सकिनेछ । जसवाट उनीहरु मध्य एक जना विजेता हुनेछन् । फाइनल प्रतिस्पर्धामा तीन प्रतियोगी भरतमणि पौडेल, सन्तोष थापा र विक्की अग्रवाल पुगेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा शो को जज बनेका मनोज गजुरेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत तीन कमेडियनको बारेमा विष्लेषण गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा स्टटास लेख्दै उनले कमेडियनहरुको विष्लेषण गरेका हुन् ।
त्यसैगरी सन्तोस थापाका ‘अङ्ग्रेजी टिचेर’, ‘महोत्सवको कथा’, ‘डेलिभरी ब्वाईको पीडा’, ‘मपनी व्यापारी’, फिनालेमा प्रश्तुत गरेको ‘भरत–विकीको चेपुवा’ लगायतका प्रश्तुतिहरु जिवन्त र हास्यब्यङ्ग्यात्मक थिए।
हजारौंबाट सयौं, सयौंबाट दर्जनौं, दर्जनौंबाट ‘उत्कृष्ट ३’ मा आईपुग्नु चानचुने कुरो होईन । यसका लागि तिनैजनाले कडा मेहेनत गरेका छन् । उनीहरु मध्ये जो ‘च्याम्पियन’ बनेपनि नेपाली हास्यब्यङ्ग्यमा एउटा बलियो ईँटा थपिने आशा गर्न सकिन्छ।